Global Voices teny Malagasy » Fa maninona no tsy avy tahaka ny mahazatra an’i Ginea-Bisao ny orana? · Global Voices teny Malagasy » Print
Fa maninona no tsy avy tahaka ny mahazatra an'i Ginea-Bisao ny orana?
Voadika ny 05 Desambra 2015 7:23 GMT 1	 · Mpanoratra Sara Moreira Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Mainty, Ginea-Bisao, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Tontolo_iainana
“Zé te-hahalala hoe fa maninona”, sarimihetsika fohy avy amin'ny Bagabaga Studios
Mampatahotra amin'ny mahalonaka ny tany sy ny fiavotan-tenan'ny mponina ao Ginea-Bisao  ny orana sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, hoy ny tatitry ny lahatsary iray navoakan'ny Bagabaga Studios.
Tamin'ny faran'ny volana Aogositra, misy fokonolona kelikely manana mponina 435 any amin'ny faritra iray saro-dalana any amin'ny morontsiraka avaratr'i Ginea Bisao antsoina hoe Elalab nahita ny voka-bariny potiky ny ranomasina. “Ho an'ny vahoaka Felupes — vondro-poko lehibe indrindra ao Elalab — dia ity voamaina ity no mariky ny harena sy ny fizakantenan'ny manan'aina ao,” hoy ny fanazavana tao amin'ny lahatsary jerena ankapobeny.
Ny vaovao avy amin'ny tranonkala O Democrata no nanampy  fa “vakin'ny tondra-drano ny fefiloha miaro natao ho sakana sy nisorohana ny fidiran'ny ranontsira ao amin'ny faritry ny ranomamy misy ny sakafo nambolen'ny Gineana sy efa andalam-pahavokarana.”
Bagabaga, koperativam-pampitam-baovao portiogey iray, no nitsidika ny faritra ary niresaka tamin'ny iray tamin'ny mponin'ny vohitr'i Elalab, Zé, izay “tsy nandre na oviana na oviana momba izany hoe fiakaran'ny maripana amin'ny ankapobeny saingy nahatsapa avy hatrany ny fisian'ny fiovana tamin'ny vanim-potoana sy ny fiantraikan'izany amin'ny fiainana andavanandro.” Mivelona amin'ny fanjonoana sy ny fambolem-bary i Zé, ary “tsy mahazo hoe fa maninona izao zava-drehetra izao no mitranga.” Izay no nanontaniany:
Tamin'ny fahatanoranay dia tamin'ny fotoanan'ny main'andro ihany no tonga ny hafanana. Ankehitriny niova daholo ny zava-drehetra. Lasa misy sira ny tanimbary. Tsy araka ny habeny intsony ny trondro. Eny fa na ny hazo mahabibo, izay mitahy ny rehetra amin'ny alokalony aza dia maty. Tamin'ny andron'ny ray amandreninay dia tsy nahatratra ny tanàna akory ny rano[masina]. Rehefa nasaina ny tany dia maty avokoa ny vary. Potika avokoa ny zavadrehetra. Ny zavadrehetra. Izay no navoakan'ny fiainana. Izay no mahatonga anay mitolona hiavotena. Izao no sazy atrehinay aty an-tanndrazanay. Tamin'ny aogositra, nahatratra ny haavony ambony indrindra teo amin'ny tantara ny haavon'ny masoandro. Iray amin'ny vohitra maro eto Ginea Bisao mety ho tratran'ny faharinganana eto. Mifanontany ny vahoaka: fa naninona no avy hatrany ny orana taloha fa tsy izany ankehitriny?
Ity sarimihetsika fohy ity dia navoaka tamin'ny herinandro nanombohan'ny Fihaonamben'ny Toetrandro 2015 tao Parisy , mitondra ireo mpanapakevitra avy amin'ny firenena 195 mandritra ny 12 hitadiavana fifanarahana hampihenana ny fandefasana eton'arina manerantany.
Nikabary tao amin'ny zaikabe ny filohan'i Ginea Bisao, Atoa José Mário Vaz, manoritra fa iray amin'ireo firenena marefo indrindra eo amin'ny vokatry ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ny firenena kely ao Afrika Andrefana. Ny sarintanin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro  navoakan'ny Foiben'ny Fampandrosoana Manerantany dia mandahatra an'i Ginea Bisao ho fahatelo amin'ny faharefoana manoloana ny fiakaran'ny ranomasina sy fahavalo eo amin'ny faharefoana vokatry ny fahaverezan'ny voka-pambolena.
“Tsapan'ny mponina manerana an'i Afrika ny vokatry ny fiovan'ny toetrandro manerantany,” hoy ny fanazavana navoakan'ny mpiara-miasa amin'ny Global Voices, 350.org , tamin'ny 28 Aogositra. “Voaporofo fa miantraika any amin'ny fahasalamana, ny manan'aina, ny fahavokaran'ny sakafo, ny fisian-drano azo sotroina, ary ny fiarovana ankapobeny ao amin'ny vahoaka Afrikana ny fiovana eo amin'ny maripana.”
Vakio ato ny: Fiantraikan'ny Fiovan'ny Toetr'andro eto Afrika Amin'ny Endrika 8 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/12/05/77375/
 Fihaonamben'ny Toetrandro 2015 tao Parisy: http://www.cop21paris.org/about/cop21
 sarintanin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro: http://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change
 Fiantraikan'ny Fiovan'ny Toetr'andro eto Afrika Amin'ny Endrika 8: https://globalvoices.org/2015/08/28/8-ways-climate-change-is-already-affecting-africa/